युवतीहरुले ‘प्राइभेट अंग’ कसरी सफा गर्ने ? डा. अनुपमा शर्माको टिप्स – Complete Nepali News Portal
धेरै जसो स्वास्थ्यकर्मीले प्रजनन स्वास्थ्यका बारेमा कुराकानी गर्ने गर्छाैँ तर उमेर परिवारमा समेत यस बारेमा कुरा गर्न लाज मान्छाैँ । त्यसैले यस विषयमा डाक्टर साथीले स्त्रिरोग विशेषज्ञ डा। अनुपमा शर्मासँग विशेष कुराकानी लिएर आएको छ । आशा छ तपाईलाई यो सामग्री अवश्य पनि मन पर्ने नै छ ।